LO: 17 jirrada dhammaantood waa iney helaan shaqo kuleeylaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
LO: 17 jirrada dhammaantood waa iney helaan shaqo kuleeylaha
La daabacay torsdag 20 juni 2013 kl 14.25
Dhallinyarada waxey shaqada ka hor istaagtaa in falal xun lagu tallaabsado
Sawirle: Janerik Henriksson, Lars Person och Gero Breloer / Scanpix.
War-bixin uu soo saaray ururka shaqaalaha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno LO ayaa lagu sheegay in booskii shaqa ah ee bannaan xilliga kuleeylaha ey u tartamayaan dhallin-yaro tiradoodu gaarsiisan yihiin 22.
Ururrada shaqaalaha ayaa dhanka kale soo jeediyey in dhammaan maamullada degmooyinku u dammaanad qaadaan shaqooyin inta lagu jiro xilliga kuleeylaha dhallin-yarada. Isabella Klang waxay ka mid tahay dhallin-yarada ku sugan shaqa la'aanta ee xilligan kuleeylaha ee sannadka:
- Waa arrin dhib badan, maadaama loo baahan yahay shaqo in la qabto wax xiiso leh. Dhanka kale waxaa la qaban karaa waxyaalo fara badan kolka shaqo la haysto. Waayo lama dul-saarnaan karo oo keliya abid waalidka.
Hase yeeshee Isabella Klang ayaan weli ka raja dhigin inay shaqa la'aan ku dhacdo kuleeylahan, balse aad ugu adkaan doonto. Maadaama uu tartanku yahay mid aad u sarreeya. Waxaa dalka ku sugan dhallin-yaro tiradoodu gaarsiisan yihiin 1,2 malyuun oo dad'doodu u dhexeeyso 15 illaa 24 jir, halka uu xafiiska shaqadu soo ban-dhigey 55 000 oo shaqooyin xilliga kuleeylaha.
Iyadoo uu booskii shaqa ahba ku soo aadeyo 22 qof, sida ay caddeeysay war-bixinta ururka shaqaalaha ee LO. Ururrada shaqaalaha ayaa iminka soo jeediyey in dhammaan degmooyinku dammaanad ku qaadaan sidii ey dhallin-yaradu u heli lahaayeen shaqooyin xilliga kuleeylaha. Tobias Baudin, ku simaha koowaad ee ururka shaqaalaha LO:
- Mid walba oo ka mid ah 17 jirrada dalka ku dhaqan waa in loo dammaanad qaado shaqo inta lagu jiro xilliga kuleeylaha, ugu yaraan saddex toddobaad. Waa fikir sahlan oo loo baahan yahay in wax laga qabto. Iyo mid mustaqbalka hoos u dhigaya shaqa la'aanta dhallin-yarada la soo gudboonaatay.
War-bixinta ayaa dhanka kale muujisay in tiro ka badan 4% oo ka mid ah dhallin-yarada dalka ku dhaqan aaney saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey heyn wax camal ama tacliin ah, sidaa daraadeeddna loo baahan yahay in degmooyinku wax ka qabtaan sidii middaa wax looga qaban lahaa, sida uu soo jeediyey ururka LO:
- Uma arko hoowshani iney tahay mid kharash un lagu geleyo, hase yeeshee waa mid lagu maal-gelineyo mustaqbalka dalka, sida uu sheegay Tobias Baudin.
Tobias Baudin ayaa sidoo kale sheegay in dawladdu howshaa ku maal-geliso degmooyinka aan awoodda u laheyn.
Isabella Klang oo dhowaantan buuxin doonta da'da 17 jir, ayaa sheegtay inay la dhac-san tahay fikirka uu ururka shaqaaluhu soo jeediyey:
- Wuxuu noqon lahaa fikir aad iyo aad u wanaag-san, isla-markaa waxaan qabaa in dhallin-yaro badani u bislaan lahaayeen suuqa shaqada kolka ey qaan-gaaraan, mar haddii ey suurtagal u heli lahaayeen shaqada xilliga kuleeylaha.
Yaxye Maxamed iyo Faysal Cismaan waxey ka mid yihiin dhallin-yaro ku dhaqan magaalada malmö oo suurtagal uga heley urur ka mid ah ururrada soomaalida ee magaalada malmö, ururka Somalind.
Ma ku guuleeysatay inaad shaqa hesho xilliga kuleeylaha ?